Koronaavaayirasii: Bara barnootaa 2013’f Itoophiyaan hangam qophoofte? - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayirasii: Bara barnootaa 2013’f Itoophiyaan hangam qophoofte?
26 Hagayya 2020
Bara barnootaa 2013'tti barattoonni Covid19f akka hin saaxilamneef qophaa’aa jiraachuu Ministeerri Barnootaa beeksise.
Ministeera Barnootaatti daariktarri koominikeeshinii Aadde Haarag Maammoo barnoota jalqabuuf dhimmoota yaadamaa turan keessaa tokko, haguuggii afaaniifi funyaanii dhiyeessuu, kutaa tokko keessatti walitti siquu hambisuuf barnoota dabareedhaan gochuu dha jedhan.
Aadde Haarag koronaavaayirasii mana barnootaa keessatti ittisuuf lakkoofsi barattoota kutaa tokko keessa jiranii murteessaa dha. Dhimma kana irrattis ministeerichi mari’achaa turuu dubbatan.
Barnoota jalqabuuf qophii akkamiitu taasifamuu qaba isa jedhuf Ministeera Fayyaafi Ministeera Nagaa waliin hojjechaa jiraachuullee himan.
‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaba’ - Aadde Gannat Zawudee
Hawaasa sirna baruufi barsiisuu maraaf barnooti otoo hin jalqabiin dura odeeffannoon akka kennamus himan.
Ministeerichi ibsa miidiyaaleef kenneen yeroo barnootni jalqabu haalli mijataan akka uumamu akka hojjetu himeera, maaskii, saanitaayizariifi mi'a biroo vaayirasichia ittisuuf fayyadan dhiyeessuuf qophii irra jiraachuu ibsameetu ture.
Aadde Haarag hanga yoonaa barnooti 2013 yoom akka jalqabu akka hin baramne himuun, ’’haala tamsa’ina vaayirasichaafi mootummaatu murteessas,’’ jedhaniiru.
Manneetiin barnootaa yeroo galmee jalqabanitti tamsa’inni vaayirasii akka hin uumamneef barattoonni, barsiisotaafi maatiin maaskii keewwachuu, fageenya eeggachuu fi harka dhiqachuu of eeggannoo olaanaatii raawwachuu qabu jedhaniiru.
Galmeen manneetii barnootaas haala qabatamaa isaan qabanirratti hundaa’uun adeemsifama jedhan.
Koronaavaayirasiin daree barnootaa gara kutaa horsiisa lukkuutti geeddare
‘’Dhimma of eeggannoo hojiirra oolchuuf mana barnootaa hanga maatiitti hawaasni itti gaafatamummaa qaba,’’ jedhan Aadde Harag.
Akkasumas barattoonni barsiisota isaanii akka maatiitti waan ilaalaniif itti gaafatamummaa dachaa qabu jedhan.
Yeroo vaayirasichi biyya gale namoota adda baasuufi rakkoo nagaafi tasgabbii biyyattii keessatti uumameen manneetiin barnootaa tajaajila kennaa turan hojii jalqabuun dura akka qulqullaa’aan mirkanaa’uu qabas jedhan.
Oolmaa daa’immanii hanga kutaa kudha lamaatti barattoota jiraniif barnooti seemisteera lammaffaa akka irra deebi’amuufis ministeerichi ibsa kenneen himeera.
Itoophiyaan erga koroonaavaayirasiin biyya galeen booda tamsa’inasaa hir’isuuf Ebla 2012 irraa kaastee manneetii barnootaa cufuunshee ni yaadatama.
Waqtiin gannaa hangam Covid-19f hamaa ta'a?
Barattoota kutaa saddeetii fi 12 ala warri jiran qabxii isaanii waggaa walakkaan akka gara kutaa itti aanutti darban taasifameera.
Hanga yoonaa qoramaatni biyaalessaa kutaa saddeetiif 12 yoom akka taasifamu hin baramne.
Itoophiyaatti hanga yoonaa namoonni 44,000 caalan koronaavaayirasiin yoo qabaman 709 lubbuu dhabaniiru.
Gannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha'
14 Fuulbaana 2019
Koronaavaayirasii: Daree barnootaa gara bakka horsiisa lukkuutti geeddarame
25 Hagayya 2020
Koronaavaayiras: Werarri marsaan lammaaffaa waqtii gannaa hangam hamaa ta'a?
2 Hagayya 2020
Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa Kaartuum jiru gaaffiif, kansheemmoo Finfinneerraa biyyatti waamte
27 Waxabajjii 2022
Daa’ima guyyaa 15 kaasuu haadha haleellaa Gimbiin ajjeefamtee keessaa argamte
Foormulaan Herregaa barataa Fayisaa Tafarii argate barattootaaf furmaata ta'aa?
24 Waxabajjii 2022
Kaayyoo qabsoo, dhimma araraafi halleellaa tibbanaa irratti 'ABO-WBOn' maal jedha?
'Ammayyuu gaa’ilattan amana' haadha warraa duraanii Biil Geetis
Haleellaa Sudaan daangaa Itoophiyaatti raawwatte irratti mootummaan Itoophiyaa maal jedhe?
US weerara Raashiyaa ittisuuf loltootashee Awurooppaa keessatti heddummeessuuf jirti
Dhibee jaalala ho'aa Mulugeetaafi Tigist karaatti hambise
Dhuguma Itoophiyaan qamadii alaa galchuu hambistee, alatti erguu dandeessii?
Itoophiyaa fi Sudaan sochii waraanaa akka dhaaban AU fi IGAD gaafatan
Naayijeeriyaatti namichi amantoota gowwoomsee masjiida diigsise to'annoo jala oole
R Keeliin 'dubartoota saal-qunnamtiif daddabarsuun' yakkame hidhaan waggaa 30 itti murtaa'e